Otu esi eme ka nyocha UTM nke Google Analytics akpaka na Salesforce Marketing Cloud | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 17, 2022 Wednesday, February 23, 2022 Douglas Karr
Site na ndabara, Salesforce Marketing Cloud (SFMC) adịghị ejikọta na Google Analytics maka itinye UTM nsochi ajụjụ ọnụọgụgụ na nke ọ bụla njikọ. Akwụkwọ ahụ dị na njikọta Google Analytics na-atụkarị aka Nchịkọta Google 360 mwekota… ị nwere ike ịchọ ile anya na nke a ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie na-gị analytics na-esonụ larịị ebe ọ na-enye gị ohere jikọọ ahịa saịtị njikọ si Analytics 360 n'ime gị Marketing Cloud akụkọ.
Maka isi nchikota Mgbasa Ozi Google Analytics, n'agbanyeghị, ọ dị mfe itinye ngwa ngwa UTM nke ọ bụla na njikọ ọpụpụ ọ bụla na email Salesforce Marketing. Enwere isi ihe atọ:
parampat nsuso njikọ akaụntụ na Ntọala Akaụntụ.
Mpempe njikọ njikọ agbakwunyere na Email Nrụpụta nke ị nwere ike hazie na nhọrọ UTM.
Agbanyere Njikọ Njikọ na Ọkachamara Zipụ Email.
Njikọ Njikọ Google Analytics na SFMC Business Unit Level
M na-agbalị ịzenarị usoro ndị ọzọ n'oge nzipu n'ihi na ozugbo ịmechara mkpọsa, ọ nweghị nlọghachi azụ. Izipu mgbasa ozi email wee cheta na ị nweghị nkwado nsuso mkpọsa bụ isi ọwụwa, yabụ ana m agba ume ka enyocha usoro UTM ndị bụ isi na ọkwa akaụntụ n'ime SFMC.
Iji mee nke a, onye nchịkwa nke akaụntụ gị ga-agagharị na Ntọala Akaụntụ gị (nhọrọ dị n'elu aka nri n'okpuru aha njirimara gị):
Na-agagharị na Ntọala> nchịkwa> Njikwa data> Njikwa oke
Nke ahụ na-emepe ibe ntọala ebe ị nwere ike hazie gị Njikọ Nchịkọta Weebụ
Site na ndabara, na A na-ahazi paramita dị ka ndị a maka nlebanya nke ime mkpọsa:
Ndụmọdụ m bụ imelite nke a na:
IHE: Anyị ahụla ebe eriri nnọchi dị iche n'ofe ahịa. Ị nwere ike ịchọrọ iji nkwado Cloud Marketing nyochaa eriri gị. Ma, n'ezie, ị ga-eziga na ndepụta ule n'ezie wee chọpụta na etinyere koodu UTM.
Nke a na-agbakwụnye ihe ndị a:
utm_mgbasa ozi echekwara SFMC
utm_medium echekwara email
utm_source atọrọ dynamically gị Aha ndepụta
utm_content atọrọ dynamically gị Aha Email
utm_term is nhọrọ Tọọ site na iji njirimara email agbakwunyere sitere na onye nrụpụta email gị
Chekwaa ntọala gị, a ga-agbakwunye oke maka akaụntụ ahụ.
Na-emelite njirimara email agbakwunyere gị
Ezochiri m data ọkwa akaụntụ na nseta ihuenyo a, mana ị ga-ahụ na ugbu a enwere m ike gbanwee njirimara email agbakwunyere iji tọọ ya. utm_term nhọrọ. Enwere m ike iji nke a maka nhazi ọkwa email m dị ka upsell, ire ere, njigide, ozi, otu esi eme, wdg.
Sochie Njikọ Mgbe Na-eziga na SFMC
Site na ndabara, Sochie Pịa na-enyere aka mgbe ị na-eziga na SFMC na m ga-akwado ka ị ghara imebi nhọrọ ahụ. Ọ bụrụ na ịmee ya, ọ bụghị naanị na-ewepụ nsochi UTM gị, ọ na-ewepụ nsuso mgbasa ozi n'ime maka ozi ahụ n'ime Marketing Cloud.
Nke ahụ bụ ya… site ugbu a gaa n'ihu mgbe ọ bụla ezigara ozi-e site na akaụntụ ahụ, kwesịrị ekwesị eriri ajụjụ nyocha Google Analytics UTM na-agbakwunyere ka ị wee hụ nsonaazụ nke ahịa email gị n'ime akaụntụ Google Analytics gị.
Enyemaka Cloud Marketing Salesforce: Jikwaa Parameters
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ mmejuputa ma ọ bụ enyemaka ntinye aka na Salesforce Marketing Cloud (ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ metụtara Salesforce), biko rịọ enyemaka site na Highbridge. Nkpughe: Abụ m onye mmekọ Highbridge.
Tags: __Agbakwunyere njirimara email1Aha email_Google AnalyticsotúAha njikọAha ndepụtanjikwa okeigwe ojii ahịa ahịa saleforcesfmcegwu njikọusoro utmutm_mgbasa oziutm_contentutm_mediumutm_sourceutm_termnjikọ nchịkọta weebụ
SlayerAI: Na-ekpebi ọtụtụ okwu dị iche iche ịchọrọ iji merie